Chrome: Kunakidzwa Kwakawanda neinjini dzekutsvaga Martech Zone
Mugovera, December 12, 2009 Chitatu, June 7, 2017 Douglas Karr
Chinhu chimwe chete chandinogara ndichifarira kukanganiswa nacho ndiyo yekutsvaga injini kana rondedzero yeinjini - zvisinei nekuti ndeye Firefox kana safari. Ini ndinotsvaga yangu yega saiti kazhinji zvakakwana zvekuti ini ndinowanzo wedzera izvo kune izvo zvinyorwa. Uye zvakare, zvinogara zvichinakidza kuita zvinhu senge Bing yako yekutsvaga injini paChannel kuchengetedza zvikara zvichirwa (I kunyatsoita seBing!).
Ndakatovaka zvangu Wedzera Injini yekutsvaga fomu yeFirefox kuti zvinhu zvive nyore. Chrome haina kunyatsoita seyakareruka, haishandisi iyo AddEngine chinhu icho Firefox inoita saka haugone kungovaka chinongedzo. Zvakare, hapana kudonhedza pakusarudza yekutsvaga injini.
Zvisinei, pane chimwe chinhu chakanakisa chine omnibar… iwe unogona kuwedzera iro kiyi yesarudzo yako yekuwedzera injini yekutsvaga. Heano maitiro ekuwedzera yekutsvaga injini:
Pamwe enda kuChisarudzo cheChannel wobva wadzvanya maneja pane Injini dzekutsvaga kana kurudyi tinya pane Omnibar uye sarudza Hora maInjini ekutsvaga.
Wedzera zita reinjini yekutsvaga kana saiti iwe yaungade kutsvaga, iro kiyi kuti usiyanise zviri nyore, uye neinjini yekutsvaga URL ine% s sezwi rekutsvaga. Heino muenzaniso naChaCha:
Iye zvino, ndinogona kungonyora "ChaCha" uye mubvunzo wangu uye Chrome ichazongonongedza iyo URL uye yoitumira iyo. Izvi zviri nyore kwazvo pane kurova kudonhedza uye kusarudza injini yekutsvaga. Ndine yega yega Injini dzangu dzekutsvaga keyworded… Google, Bing, Yahoo, ChaCha, Blog… uye ingoshandisa omnibar kukurumidza kuwana mhedzisiro! Ukangotanga kutaipa, Chrome inogumisa uye inopa info yekutsvaga:
Iwe unogona kunyange gadziridza yako Mamiriro eTwitter uchishandisa omnibar sezvo Twitter iine querystring nzira yekuzadza Tweet. Kana iwe unogona kuwedzera kiyi yekukurumidza nzira yekutsvaga twitter nayo http://search.twitter.com/search?q=%s.
kuburitsa: ChaCha mutengi wangu. Vane mhedzisiro inoshamisa, kunyangwe… kunyanya kana iwe uchitsvaga chinhu chakareruka sekero, nhamba yefoni, trivia mubvunzo, kana kunyangwe zvirinani… majee. Ivo vane mamwe anoshamisa akasimba mapeji pane vanozivikanwa uye misoro, futi.
Tags: mubrowserChromegoogle Chrome